waa kuma maxaadse ka taqaanaa aamir hussain khan, wardoon.tripod.com
waa kuma maxaadse ka taqaanaa aamir hussain khan?.
Aamir hussain khan waxa uu ku dhashay mumbai bishii march 14 keedii sanadkii 1965, waxa uu ka soo jeedaa qoys muslim ah oo dhamaantood ku lug leh si balaadhan shirkadaha filimada hindiga.
Amir khan waxa uu bilaabay xirfadiisa filim matalida isaga oo caruur ah filimkii Yaadon ki baarat (1973) iyo Madosh ka dib 11 sanno, wuxuu sameeyay filimkiisii ugu horeeyay ee waynida uu ku matalo, ketan mehta's roli (1984). 1988 ayaa uu helay doorkiisa ugu horeeyay ee filim matalida, filimkaas oo ahaa Qayamat se qayamat tak, kaasi oo ahaa guul wayn, intaas ka dib aamir waxa uu siwayn uga muuqday maslaxa aflaanta filimo dhawr ah oo kale intii ka horeaysay 1990s,.
si kastaba ha ahaatee, aamir waxa uu ku guulaystay filimkiisii ugu wanaagsanaa sanadadaas oo ahaa Dil kaasi oo soo baxay 1990, oo noqday filimka ugu sita sanaadkaasi
Marka laga yimaado dhanka aflaanta, hadaynu wax ka nidhaahno dhanka noloshiisa shaqsiyeed (personal life): aamir waxa uu jacayl u qaaday Reena dutta, laakiin maadaama oo uu muslim ahaa, waalidkiisa kamay aqbalin in uu guursado, laakiinse markii ay da'diisu noqotay 21 jir, ayaa uu usoo bandhigay iyada arin guur, waanay ka aqbashay, laakiinse guurkooda ayaa ahaa mid qarsoonaa in mudo ah. reena dutta iyo aamir khan waxay isu dhaleen labo caruur ah (wiil junaid iyo inan Aira), ugu dambayntiise way kala tageen.
Aamir khan waxa uu markale guursaday Kiran rao taasi oo ahayd caawiye director intii la duubay filimkiisii Lagaan